Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အရက်ပါ ထမင်းဝိုင်းလေး
Writer Sein Lyan Time 10:54 pm
ညီလည်း ဖတ်ပြီးခံစားရတယ် အကိုရယ်
goat wind နေတဲ့သူအတွက် ကဗျာရေးထားတယ်
အင်း .. အိမ်ကိုတောင် လွမ်းလာပီ သာကောရယ်
မိဘတွေကို ပြန်ဆုံးမရတာလောက် ခက်တာမရှိဘူး ... ဟူးးးးးးး
30 March 2009 at 04:51
အိမ်ကိုတောင်လွမ်းသွားပြီ အကို .ရယ်..မုန့်ကျွေးမယ်ဆိုလို့လာတာ..ဖရဲသီးစား
မောင်တို့ မိသားစုက အရမ်းကြည်နူးဖို့ ကောင်းလိုက်တာ.... မောင့်စာတွေ ဖတ်ရတိုင်း ချစ်က ပီတိဖြစ်ရတယ် သိလား.... မောင်က အရမ်း စာရေးကောင်းတယ်...း)
ဖေဖေ့ကို လည်း ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်ပါဦးမောင်ရယ်...
မေမေ့ကိုတော့ သိပ်စိတ်မပူဖို့ ပြောလိုက်ပါ...
ချစ်လည်း မော်လမြိုင်ရောက်ရင် ဖေဖေနဲ့ မေမေ့ဆီကို ၀င်တွေ့လိုက်ပါဦးမယ်... မရောက်တာတောင် ကြာသွားပြီလေ....
ဒီတခါ သွားရင် သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ခဲ့လိုက်ပါ့မယ်မောင်... မောင်လည်း သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့နော်....
မောင်ရေ...မောင်လည်း အရက် သိပ်မသောက်နဲ့နော်.... ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်... သိလား
ပြန်ဆုံတွေ့ရမယ့်နေ့ကို မျှော်နေတယ်နော်.. .. ချစ်လွမ်းနေပြီသိလား...
အမလေးဟဲ့။မောင့်ရဲ့အချစ်ရေးတဲ့ အပေါ်ကစာတွေဖတ်လိုက်ရတာ...ကိုယ် ရေးမဲ့ အကြောင်းတောင်မေ့သွားတယ်...အဟီးး။ နောက်ဆို အိမ်ပြန်တဲ့ အခါ အဖေ့ကို မုဆာခါလေးချက်ကျွေးပြီး ထမင်းစားဝင်အောင် သူသောက်မဲ့အရက်ကို ကိုယ်ဦးအောင်သောက်ပစ်.... ကြားလား...
အင်း ။ မိုက်တရ်ဗျာ ။ ဦးဦးဖျားဖျားမဖတ်လိုက်ရတာ နာတရ် ။ ဟီး ။ ညီလည်းလွမ်းနေတရ် ဖေဖေ့ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်း လေပါ့ ။ အဲ ဒါပေမဲ့ ချစ် စာလေးကိုတော့ ၂ ယောက်မြောက် ဖတ်လိုက်ရပါတရ် ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေဗျို့  ။
အား... ပါးးးးးးး.. အရေးအတားဂ ချယ်ပဲဟေ့... အူးအူးဖွတ်ချိန်တို့ကတော့ လန်းဒယ်ကွာ... ဟတ်ဟတ်...
တွန်မန့်မာရဲ ချစ်ချစ်တွေ ကောဘာတွေကော.. စုံနေဒါဖဲ... ဟူးးးးးးးးး အားကျချရာဒွေ ပါရား.. ချာဖတ်တူတွေတောင် ဘာပေါရမှန်းမတိဖူး..
အူးးအူးဖွတ်ချိန်ရဲ့ ချစ်ချစ်ချိုဒေ့ါ မက်မက်ယဲ့ တီတီပေါ့...
အမယ်.. အူးအူးဖွတ်ချိန်ကို ဒိုင်လျိုလုပ်နေတာပေါ့လေ.. ဟုတ်လား.. ပို့စ်ရေးလေဗျာ.. ချစ်ချစ်အကြောင်းလေး.. နာမည်လေးဘာလေးလဲ မပါဘူးတော့.. သိပ်လျို့ဝှက်တာပဲ.. မရဘူး.. ချစ်ဆိုတဲ့ အူးအူးဖွတ်ချိန် ကောင်မလေး အကြောင်းကို ပို့စ်အသစ်အနေနဲ့ တင်ပါဗျို့.. ဟတ်ဟတ်... ဘလော့မှာ လိုက်ဖွလိုက်မှာနော်.. :P :P
လိုက်ဖက်လိုက်တာနော်.. စုံတွဲလေးက ..
ဒီမှာ အစ်မကတော့ ခေါင်းစားနေတုန်း.
နေလို့မကောင်းဘူး..ဟဟ..စာရေးခိုင်းလို့ ဖျားချင်ယောင်ဆောင်တာ.း)
ဦးဦးဖွတ်ချိန်ရေးထားတာ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ..။ ဦးဥဖွတ်ချိန် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်သင့်ကြောင်း။
ကြည်နူးစရာ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းလေးပါလား။ ရေးတတ်လိုက်တာ။ ညီမလေးကလည်း စကားတတ်တယ်နော်။ ကိုဇနိကိုပါ ဖတ်ပြပြီး တခွိခွိရယ်နေရတာ။ ဟုတ်ပါ့။ တနေရာစာလွတ်နေလို့ အိမ်ကလည်း လွမ်းနေမှာ အသေအချာပါပဲလေ။
စိန်ကိုကိုရယ်... ရေးထားတာဖတ်ပြီး အိမ်ကိုတောင် လွမ်းသွားတယ်။
ဟီးဟီး ကျွန်တော်ဆိုးတာက အငယ်ဆုံးလေးနဲ့တူတယ်
အမယ်... အမယ်.. ခုမှပဲ မန့်ထားတာတွေ ဖတ်ရတယ်.... ပြောတုန်းကတော့ single ဆို.. အခုတော့ ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေတောင် ဒီပေါ်တက်လာပြီ.... ဒါက ဘာအချိုးချိုးတာလဲ... ကိုကျောက်ခဲရဲ့.... (စိန်တန်ဖိုးကျသွား၏)
ဟင်း.. ဟင်း.. သိမယ်... ဒင်းသိမယ်။ တီတီချမ်းရေ.. လာခဲ့ပါ့ဦး.....
ဒီမှာ ငကျောက်ခဲ .. အနော့်ကို လိမ်သွားတာ။ အခုတော့ ကာယကံရှင်တွေ.. အိမ်ပေါ်တက်လာပြီ..
မောင်ဖိုးစိန်ခေါ် (တီ့ အခေါ် ချစ်စိန်လေး) သည်
တီ ဟု သူက ချစ်စနိုးလေးနဲ့ခေါ်သော ငယ်ချစ် နုနယ်ဥဖွယ် အရွယ်၊ နုချစ်ဥဖြစ် ကလေးလေးဘ၀ နှပ်တွဲလောင်းကတည်းက
ချစ်လာသော၊ အတူးရေ အသက်ရေ
တီ ရေ စိန်ရေ စသဖြင့် အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်လာခဲ့သော၊ လူကြီးများလည်းသဘောတူထားခဲ့သော၊ (အဲ မေ့တော့မလို့) စိန်၏ မမ မမ၀ါဝါ ကလည်း ညနေက သဘောတူလိုက်သော (အင်းသဘောတူဖို့ မနော် ကျန်သေးတယ် သွားဖားဦး မှ)
စိန် သည်း ၏ တဦးထဲ တီ သည်း ဖြစ်ပါသည်
ထို့ကြောင့် ချစ်၊ ဖြူ သက် စသော မိန်းမကလေးများ သည် ဒူးရင်း သီး၊ သရက်သီး၊ နာနတ်သီး စသည်တို့ကို သောကြာနေ့တိုင်းတွင် (ဒု သ န သော) မရောင်းချင်လျှင် တီ့ မောင်ချစ် သည်း စိန်စိန် တီ့ အသည်းလေးအား ရှောင်ကြ ရှားကြပါ။
အကြီး ဆုံး (ကျမ သာလျှင် ပထမ)
ဘယ်က မောင်တွေ၊ ချစ်တွေ ပေါ်လာတာလဲ။ ပြောတော့ သဲသာ ပထမဆို။ အခုတော့ နက်လေးမကောင်းတာ တပတ်တည်းရှိသေးတယ်။
ဖိုးစိန်ရေ ကွန်မန့်ကချစ်တွေ မောင်တွေသဲတွေဖတ်ပြီး ဘာရေးရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ပြန်ပြီး
ဗုဒ္ဓေါ ဦးဖိုးစိန် အဟိ..တယ်စွံနေပါလား။ သူစွံကြောင်း ကြွားချင်တာနဲ့ အိမ်လာပြီး အပျိုကြီး လာခေါ်သွားတာကိုး။ :))
မကြီးကီ ပြောသလိုပဲ လာရင်းကိစ္စတောင် မေ့သွားတယ်။ :)))
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပိုစ့် ။ ရယ်ရလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင်ကျတယ်။
အင်းခုန က လာနောက်သလိုဖြစ်သွားလို့ တီ တခါ ပြန်လာတာ
တီ လဲအဖေ ဆိုတာ ကိုမတွေ့ဘူးလိုက်ဘူးလေ
အဖေ ရှိတာ ဘယ်လိုနေမလဲဟင်
ဒါပေမယ့် တီ က အဖေ အသစ်ပဲလိုချင်တာ
အမေ ပြောပြတဲ့ တီ့အဖေအရင်း ကိုတော့ မလိုချင်ပါဘူး
ဒါကြောင့် အမေ ကို ငယ်ငယ်က အမြဲ အဖေ သစ်ရှာလို့ ပြောလေ့ရှိတယ်
ကလေး ဘ၀ တုံးကတော့ တကယ်ပြောတာနောက်မှ တီ့အကြောင်းစိန့် ကိုပြောပြမယ်နော်
တီချမ်း ကွန်မန့်ဘောက်ထဲမှာ ဘာလို့ရစ်သီရစ်သီ လာလာလုပ်နေတာလဲ.... ပြန်ပါတော့..
ပြောတုန်းကတော့ ပထမလေး.. ဘာလေးနဲ့... ဟီးဟီး.. အနော်က တီ့နောက်ကွယ်ကနေ... တီ့ကိုရီနေတာ သိဘူးမလား.... ကျောက်ခဲညာတာ ခံလိုက်ရပီ..... ဟီးးးးး
ဖိုးစိန် မိသားစုလေးကို လွမ်းနေရှာတာပေါ့နော်
ပျော်စရာ မိသားစုလေး ..
ညီတို့ မိသားစု ဘဝက ဘယ်တော့ဖတ်ဖတ် အားကျဖို့ ကောင်းတယ်။
ပျော်စရာမကောင်းခဲ့တဲ့ ကိုယ့် မိသားစု ငယ်ဘဝကိုလည်း ပြန်သတိရတယ်။